Tahaka ny ahoana no fiantraikan’ilay valanaretina tamin’ny fiainan’ny olona erantany? Mizara ny tantarany ireo mpandika ato amin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Mpandika mitantara ny zavatra niainany avy any Italia, Meksika, Shily
Nandika (en) i Clara G.
Voadika ny 19 Aogositra 2020 13:18 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, عربي, Nederlands, Español
Sary an'i Pexels/Pixabay mampiasa ny lisansa Pixabay .
Ny Global Voices (GV) dia miankina be amin'ny vondrompiarahamonina iray misy ireo mpandika izay, miaraka amin'ireo mpanoratra ato aminay, mitondra ny fandrakofana ataonay. Ohatra, hatramin'ny nivoahan'ny vaovao voalohany momba ny valanaretina avy any Shina, ireo mpandika avy ao amin'ny Global Voices amin'ny teny espaniôla dia nandika isanandro ireo vaovao farany momba ny COVID-19. Singa iray tsy misaraka mandrakariva amin'ny Global Voices ireo mpandika satria izy ireo no mamorona tetezana eo anelanelan'ireo vondrompiarahamonin'ny fiteny isankarazany. Marobe ireo mbola mavitrika kokoa hatramin'ny niantombohan'ilay valanaretina. Mizara ny zavatra niainany nandritra ilay valanaretina ireo mpandika ato amin'ny Global Voices avy any Shily, Meksika ary Italia, ankoatra ireo avy amin'ny toerana hafa, sady manazava ny fomba nataon-dry zareo hampifanarahana ny rotorotony andavanandro tamin'ilay fihibohana.
Samantha Santos, mpandika ho an'ny GV, monina ao Mexico City, no miresaka momba ny fahitàna ny tanàna misy azy lasa toy ny haolo:
Maria Angélica Marin avy any Shily, milaza amintsika hoe:
Ny mpandray anjara amin'ny GV, Lara Pruna, miresaka momba ny dia lavitra ezaka nataony avy tany Japàna tao anatin'ilay valanaretina:
Alan Emilio Suárez dia Kôlômbiàna monina any Italia. Lazainy amintsika ny niainany ny fihibohana:
Avy any Espaina i Lourdes Sada no mizara ny zavatra niainany:
Raha ho an'i Romina Navarro, izay monina ao Buenos Aires, Arzantina, ezahany ny maka tombony amin'ny fotoana fipetrahana an-trano misimisy kokoa:
Carlos Castillo, avy ao Santiago, manao fampitahàna ny toedraharaha misy ao an-tanànany amin'ny an'ny marary iray manao izay saim-pantany: